पहिलो युद्ध बिराम र शान्तिवार्ता भएको दाङको हापुरे ओझेलमा ! शान्तिवार्ता भएको घर खोज्छन् बटुवा – www.agnijwala.com
पहिलो युद्ध बिराम र शान्तिवार्ता भएको दाङको हापुरे ओझेलमा ! शान्तिवार्ता भएको घर खोज्छन् बटुवा
राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापन गर्न तत्कालिन माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी ग¥यो । २०६० सालमा पहिलो पटक युद्ध बिराम भएको थियो । त्यतिबेला धेरै अनौपचारिक वार्तापछि २०६० सालमा तेस्रो पटक हापुरेमा शान्तिवार्ता भएको थियो । तत्कालिन माओवादीको मूल व्यवस्थापनमा हापुरेमा शान्तिवार्ता भएको थियो ।
जसमा माओवादीको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापाबादल’, कृष्णबहादुर महरा थिए भने तत्कालिन सरकारको तर्फबाट कमल थापा र प्रकाश चन्द्र लोहनी थिए । जब दाङको हापुरेमा शान्तिवार्ता शुरु भएको थियो, देशभरको ध्यान दाङको हापुरे केन्द्रीत थियो । तर वार्ता भने सफल हुन सकेको थिएन् । त्यहाँका बासिन्दाले अहिले पनि त्यो वार्तालाई झलझली सम्झिरहेका छन् । स्थानीय शिवलाल खत्रीको घरमा वार्ता भएको थियो । त्यो घर अहिले पनि सुरक्षित छ ।
शान्तिवार्ता भएको घरमा अहिले पनि खत्रीको परिवार बस्दै आएको छ । उनको कोठामा नेता बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराको फोटो राखिएको छ । ईतिहास बोकेको घरको सम्झना स्वरुप फोटो राखेको खत्रीले बताए । ‘त्यतिबेला भएको शान्तिवार्ता ऐतिहाँसिक हो’ उनले भने ‘त्यसको सम्झना स्वरुप उहाँहरुको फोटो राखेको हुँ ।’ उक्त स्थानलाई नमूना संग्राहलय बनाउनु पर्ने उनको माग छ । द्वण्द्वकालमा एउटा ईतिहास बनाएको उक्त स्थानमा कुनैपनि चिनो नराखिएको भन्दै उनले त्यसको संरचना र चिनारीका लागि संग्राहलय बनाउनु पर्ने बताए ।
यसका लागि राज्यले पनि पहल थाल्नु पर्ने बताए । शान्तिवार्ताका क्रममा हापुरे आएका बादल अहिले गृहमन्त्री र महरा सभामुख भएकाले त्यहाँको विकासमा उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘शान्तिवार्तामा आएका वादल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, महरा सभामुख हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘उहाँहरुले शान्तिवार्ता भएका स्थानहरुलाई संग्राहलय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
’ सडकले भत्काउँदैछ घर ? उक्त घर सडकले भत्काउँदैछ । सडकले नापी नगर्दा त्यो घर बनाएको क्षेत्रलाई सडकले ओगट्छ ।
यसरी सडकले घर भत्काएमा शान्तिवार्ता भएको स्थानको ईतिहास मेटिन्छ । यसले गर्दा उक्त घर संरक्षणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
शान्तिवार्ता भएको उक्त घर संरक्षण गरे आउने पुस्तालाई पनि ईतिहास थाहा हुने भन्दै शान्तिवार्ता भएको स्थानलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने खत्रीको भनाई छ ।‘प्राविधिकले नापी गर्दा यो घर निर्माण भएको जमिन सडकले ओगट्छ’ उनले भने ‘यसो हुँदा घर भत्काउनु पर्ने र आउँदा पुस्ताले शान्तिवार्ता भएको घरको नाम निसाना नै थाहा नपाउने अवस्था शिर्जन हुन्छ ।’
अहिले बाहिरबाट जुन ब्यक्ति हापुरे पुग्छन् ती सबैले सोध्छन् ‘युद्धको समयमा शान्तिवार्ता भएको घर कुने हो ?’ अहिले बाहिरबाट हापुरे आउने हरेक ब्यक्तिले शान्तिवार्ताका बारेमा सोध्ने गरेको नेकपाका नेता तथा हापुरेका अगुवा भिमबहादुर वलीले बताए । हापुरेले एउटा ईतिहाँस बनाएको भन्दै अब हापुरको विकासमा लाग्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
वार्ता भएको १५ वर्ष पुग्यो । त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको हापुरले अहिले भने त्यति चर्चा पाउन सकेको छैन् । मुलुकले शान्ति पायो, राजतन्त्र फाल्यो, संघीय गणतन्त्र पनि ल्यायो । विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढिसक्यो तर शान्तिवार्ता भएर ईतिहाँस बनाएका क्षेत्रको विकासमा कुनै चासो नदिएको हापुरे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद आइतबारेले बताए ।